နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်ခြင်း နှင့် ပေါက်ကရ ၈၀များ...။
khin oo may September 21, 2008 at 1:41 PM
၁။ သုန= dog… what I guess
၂။ တက်စီ ကဘယ်လောက် ကျ သလဲ သိချင်ပါတယ်။ နှမြော လို.ပါ။ ပိုက်ဆံ ရှာ ရတာ ဘယ် လောက် ခက် သလဲ ဆိုတာ သိရဲ.လား။ လေ ထဲ ကလာ တာမဟုတ်. ချွေးနဲ သွေးနဲ. မျက် ရည် နဲ.ရှာထားရတာ။
တို.လဲ pulse လေး ပေါင်ပေါ် ကနေ လျောကနဲ ကျကျန် ခဲ.ဘူးတယ်။ ကားထွက်သွားတာနဲ. သီလိုက်တယ်။ နံပါတ် မှတ် ပြီး ချက်ချင်းဖုံးဆက် တာ မတွေ.ပါဘူး။ အဲဒီ ကား အဲဒီ နေရာ မသွားပါဘူးလို. အဖြေရပါတယ်။ ဟို ၁၀ နှစ် ကပေါ.။ စလုံး ၁၅၀ ပါပါတယ်။ မောင်လေး သဘော်သား ကို မုန်.ဘိုးပေး မလို.ထုတ်ထားတာ။
၃။ ကိုယ်ငှားမယ် ကြံတဲ.အိမ်လဲ သူများဆီ ပါသွား။ ဝီရီယကလည်းနဲ. ဒါကြောင်.မို.ရှိပြီးသား ရည်းစားသူ များဆီ ပါ ( အရှိုက်ထိသွား)
၄။ စည်းကမ်းကလည်း မရှိ
၅။ မိုးလင်းမှ အိပ်
၆။ နေလွဲ မှ ထ
၉။ ကိုဘွိုက်စ် လိုလူ.
၁၀။ တို.တူမနဲ. မပေးစားလိုဘူး။.
Ko Boyz September 21, 2008 at 2:24 PM
ekke... အရှိုက်ကို အဟုတ် ထိသွားသဗျာ....။ အီးမေးလ် ပို့ထားတယ်...။
Taungoo September 21, 2008 at 2:26 PM
သုနက္ခ လို့ သိထားပါတယ်။
သုန လို့ခေါ်တာတော့ ခုမှ သိရပါတယ်။
Ko Boyz September 21, 2008 at 2:51 PM
ကိုတောင်ငူရေ...။ အတိုကောက် သုံးလိုက်တာပါ...။ အစ်ကို ပြောဲ့အတိုင်း သုနက္ခကမှ အမှန်ပါ...။ ပါဌ်ဆင့်တွေ ရိုက်ရမှာ ပျင်းသွားလို့ပါ...။ သိုင်းကျူး...။
Soe Mya Nandar Thet Lwin (Borros Roxo) September 21, 2008 at 8:59 PM
အင်း ပြောရင်လဲ ခံမှာပဲ။
Generally ဖတ်ရတာ နားလည်ပါတယ်။
စဉ်းစားစရာ ဖြစ်စေတာက ''ဒုံရင်းဒုံရင်း., ပလီလွန်းတယ်., ဖိုးဖိုးအိပ၊်ဖွားဖွားအိပ် နံပါတ်'' ပဲ။
ကရင်ဒုံရင်း အက ဆိုတာတော့ ကြားဖူးတယ်။
ဂရုတစိုက်ဖြေပြ၊ ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါ Boyz ရေ။
Tips: မူးပြီး ခေါင်းကိုက်တဲ့ဲ့ အရသာကို ခံစားရရင် အိပ်ရာထထခြင်း Hot Shower လုပ်၊ ပြီးရင် Black Coffee ခါးခါးထဲ Fresh Lime squeeze လုပ်ပြီးသောက် ပြီးရင် ဘာမှမလုပ်ပဲ တနေ့လုံး Relax လုပ်..
နန္ဒာတော့ Hangover ဖြစ်ရင် အဲလိုလုပ်တာ သက်သာ၏။ မယုံ စမ်းကြည့်။
Ko Boyz September 21, 2008 at 9:03 PM
ဒုံရင်း၊ ဒုံရင်းဆိုတာ နဂိုမူလအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတာကို ပြောတာပါ...။
ပလီတယ် ဆိုတာ မဟုတ်တာကို အဟုတ်ပါလို့ ညာညာပြောတာကို ပြောတာ...။
ဖိုးဖိုးအိပ် ဆိုတာ Four Four Eight ကို မြန်မာလို ဖလှယ်သံးပြီး နောက်ရေးထားတာ...။
Hangover ပျောက်နည်း ပေးတဲ့ အတွေက် ကျေးဇူးပါ...။ လောလောဆယ်တော့ ပါးစပ်ထဲမှာ ခါးသက်သက် ဖြစ်နေတယ်...။
khin oo may September 21, 2008 at 10:28 PM
၁။ ပါးစပ်ထဲ ခါ်း သက် သက်ဖြစ် နေရင် ရေမျောရေနဲ. လိုက်ပါလား။
(ဟိုနှစ်ယောက် လာ မမေးခင် ဖြေထား၏)
၂။ မောနင်းပက်လေး မှ မချလိုက်ဘဲကိုး။
(မနက်ပိုင်း တစ်ပက် ထပ်သောက်ပါလားဟုဆို လိုသည်.)
၃။ ဟင်း…..ခက်သေးသည်။ (ညည်းညူခြင်း)
၄။ ခန်.မှန်းချက် …Boyz အိမ်တွင် သံပရာ သီးမရှိပါ။ မယုံ လျှင် Boyz အား မေးမြန်း နိုင်
ကိုပေါ September 22, 2008 at 3:42 PM
ကောင်လေး… တီဇက်အေနဲ့ပေါင်းပြီး မြန်မာ ကဗျာတွေကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့။ ဂလိုလေးဆို တော်သေးတယ်။